Yarrad - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Lacagta Meherka)
Guur reer Galbeed
Guur la diyaariyey
Yarrad (Af-Ingiriis: dowry; Af-Carabi: دوطة) sidoo kale loo qoro Yarad, waa lacag ay bixiyaan qoyska wiilka caruuska ah ee guursan raba gabadh taasi oo ujeedadeedu tahay in reerka gabadha dhalay loogu mahadnaqo ogolonshaaha doonista iyo arooska gabadhooda. Dhinaca kale, guurku waa midowga lamaane si u sii wadaan jiritaanka aadamaha. Guurku wuxuu ahaa mid soo jireen ah tan ilaa wakhtiyadii ugu horeeyay ilbaxnimada dadka. Dunida maanta waxaa ka jira nidaamyo iyo caadoyin badan kuwaasi oo ku salaysan dhaqanka, dhaqaalaha, wadanada, diinta iyo nolosha.
Noocyo ka mid ah Arooska
Aroos Hindi (Hindiya)
Aroos Islaam (Tuuniisiya)
Aroos Masiixi (Filibiin)
Aroos khaniis (Maraykanka)
5 Sidoo kale fiiri
Aroos waa dhacdo dabaaldega midowga labo qof ku galayaan guurka. Sida caadiga ah, aroosku waa xaflada iyo damaashaadka wakhtiga ay dhacayso meherka iyo wixii damaashaad iyo farxad ah ee la xidhiidha. Nidaamka iyo dhacdada aroosku waa mid ay ku kala duwan yihiin bulshada caalamku taasi oo ku xidhan dhaqanka, caadada, diinta, wadanka, bulshada iyo heerka darajada dhaqaale ee lamaanaha.
Lacagta Meherka Meherku waa Hanti mood iyo maalba ah ( Xoolo nool, Guryo, Gaadiid, Lacag IWM ) waxa ay doonto ha noqotee, balse maaha wax la bixiyo marka laba qof is arooseyso, ee waa Hanti loogu tala galay in ay raggu ku xalaashadaan gabdhaha ay aroosayaan, waana hanti ay ku soo heshiiyaan marka ay sheekeysanayaan inta aan la imaan goobta la isku mehersanayo. Hantidaas waxaa iska leh oo la siiyaa gabadha oo lama siiyo reerka gabadhu ka soo jeeddo iyo cid kale toonna, haddii aan ninku bixin karin hantidaas waxaa ka dhaafi kara keliya gabadha uu guursadey, waayo waa xaq ay iyadu gaar uleedahay oo ninka waajib ku ah marka laga eego xagga shareecada Islaamaka. Aroosku waa xaflada loo dhigo midowga labo qof ku noqonayaan lamaane is-guursaday. Waxaa jira noocyo badan oo damaashaad iyo dabaaldeg ah oo la xidhiidha arooska. Dhaqanka Soomaalidu wuxuu leeyahay nidaam u gaar ah oo loo dhigo arooska.
Guurku waa labo qof sida ninka iyo naagta marka ee is guursadaan. Waa dad kadhaxeeyo isla shaqeen, dhaqaale iyo jaceel. Soomaalida marka ee is guursanaayaan waxaa loo qabtaa buraanbur iyo cayaar. Guurka waa maalin farxad leh, qof walba neh inta oo noolyahay mar uu guursanaa, guurka sidiisa ba waa nolosha biniaadanka. Qof marku uu guursado wuu dagaa oo fakarka badan aya daaya.
↑ Otnes, Cele & Pleck, Elizabeth (2003). Cinderella Dreams: the Allure of the Lavish Wedding, p. 31. University of California Press, Berkeley.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yarrad&oldid=170023"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 03:29, 16 Luuliyo 2017.